शिशु बेचबिखनमा बाल मन्दिरका निर्देशक पक्राउ
१२ माघ २०७६, आइतवार
द्वितीया , अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस/विश्व कुष्ठरोग दिवस
बिहानको ०३ : २९
Make Kundali | Buy Tickets | Live Video Call ( use 2020 as Discount Code )
setopati.com . ५ महीना अघि
शिशु बेचबिखनको आरोपमा नेपाल बाल संगठन, बाल मन्दिर नक्सालका निर्देशक बालकृष्ण डंगोललाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। साउन १२ गते बर्थिङ सेन्टरमा जन्मिएको शिशुलाई बेलायती नागरिकलाई बेचबिखन...
बालिका बेचबिखनमा बालमन्दिरकै निर्देशक !
lokaantar.com . ५ महीना अघि
साउन ३०, २०७६ काठमाडौं– बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बालबालिका बचबिखनको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुुसार केही दिनअघि नै प्रहरीले डंगोललाई पक्राउ गरेको हो । बेलायती नागरि...
बालिका बेचबिखनमा बाल मन्दिरका निर्देशक !
reportersnepal.com . ५ महीना अघि
काठमाडौं ३० साउन । बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बालबालिका बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार केही दिनअघि नै प्रहरीले डंगोललाई पक्राउ गरेको हो । बेलायती नागरिक डिना स...
बालबालिका बेचबिखनको आरोपमा निर्देशक डंगोल पक्राउ
ratopati.com . ५ महीना अघि
काठमाडौं– बालबालिका बेचबिखनको आरोपमा बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल पक्राउ परेका छन् । डंगोललाई केही दिनअघि अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो । डंगोलले ...
बालबालिका बेचविखनको आरोपमा बाल मन्दिरका निर्देशक पक्राउ
deshsanchar.com . ५ महीना अघि
काठमाडाैँ – नक्सालमा रहेको नेपाल बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बालबालिका बेचबिखनमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। उनलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो। उनले बेलायती नागरिक डिना स्मिथ...
बाल संगठनका प्रमुख डंगोल पक्राउ:मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोप
imagekhabar.com . ५ महीना अघि
गृष्मा राजभण्डारी काठमाडौं, साउन २९ । बाल संगठनका प्रमुख बालकृष्ण डंगोललाई प्रहरीले पक्रेको छ । उनलाई मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्रेको हो । बुधवार विहान पक्राउ गरिएका उनलाई प्र...
बालबालिका बेचबिखन आरोपमा बाल मन्दिरका निर्देशक पक्राउ
annapurnapost.com . ५ महीना अघि
काठमाडौं : बालबालिका बेचबिखनको आरोपमा प्रहरीले बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोललाई पक्राउ गरेको छ। डिना स्मिथ नाम गरेकी बेलायती नागरिकलाई बालिका किनेर बेलायत लान सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले डं...
बालमन्दिरकै निर्देशक बालिका बेचबिखनमा
saralpatrika.com . ५ महीना अघि
काठमाडौं, ३० साउन । बालिका बेचबिखनमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोपमा प्रहरी परिसर काठमाडौंले बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोललाई पक्राउ गरेको छ । केही दिनअघि अर्काको सन्तानलाईआफ्नो छोरी बनाएर लैजान...
बालबालिका बेचबिखनको आरोपमा बालमन्दिरका निर्देशक पक्राउ
onlinekhabar.com . ५ महीना अघि
२९ साउन, काठमाडौं । बालबालिकाको संरक्षणका लागि खोलिएको संस्थाकै अधिकारी बालबालिका बेचबिखनको आरोपमा मुछिएका छन् । नक्शालस्थित नेपाल बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय ग...
बालकृष्ण डंगोल पक्राउ प्रकरण : ‘विदेशीलाई बच्चा बेचेबापत ८ हजार पाउन्ड 'डिमान्ड'
काठमाडौं । बुधबार बिहान नेपाल बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बालबालिका बेचविखनको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । डंगोललाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको विशेष टोलीले नक्सालस्थित बाल मन्दिरको गेटअ...
बालबालिका तस्करीमा बाल मन्दिरकै निर्देशकको सहयोग, निर्देशक डंगोल पक्राउ
nepalkhabar.com . ५ महीना अघि
नेपाली बालबालिकालाई आफुले जन्माएको नक्कली कागजपत्र बनाएर बेलायत लैजान खोज्ने महिलाका मुख्य सहयोगी बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल भएको खुलेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले डंगोललाई तस्क...